Ask Tete Archives - Page 3 of 3 - Nhau Dzevakuru
Tete: Ndingaitesei kuti murume anakirwe pakuisana? Mubvunzo wako wakanaka chose, iwe ratidza kuda kuisana nemurume wako pese paada iye, uye kana akaita nguva refu asina kuratidza kuda (ngatiiti 12 hours) muudze kuti uri kuda kuiswa. Kana mava kuisana...
Max - April 7, 2018
Ndakamuka ndikaona Sister wangu achiyamwa mboro yangu – Please Help Tete. Ndibatsireiwo hama we kana paine akambopindawo musituation yangu please tell me kuti makabudawo sei… Ndinonzi Richard and i stay in Joburg with my family....
Varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo kana kummudza kuti ndirikuda kuiswa! Kana murume akaneta musana ndoitawo sei? Kuneta musana zvinoreva kuti murume haasi kugona basa pabonde. Anonetsa kukwezva. Anoona mukadzi wake semunhu akangomirira...
Tete: Ichokwadi here murume akandipinza ndisina matinji inongobuda yega?
Tete: Ichokwadi here murume akandipinza ndisina matinji inongobuda yega? Hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete. Mukadzi wese asina kuremara ane matinji. Matinji kukura kwawo hakunei nokupinzwa mboro nemurume. Murume anopinza mboro kuzasi kwebeche. Matinji ari kuno...
Tete: Zvinotyisa here kutanga kusvirana nemukomana? Ko kana ane chinhu chihombe zvakanyanya? Hazvityisi. Usagare uchityiswa nazvo asi nzwisisa kuti kana watorara nemukomana ukabviswa humhandara hazvichakwanisiki kuti uve mhandara kune umwe mukomana waucharara naye. Zviri nani...